WordPress: Jetpack ကို Install လုပ်ပြီး Hovercards ကို Enable လုပ်ပါ Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 30, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ပထမ ဦး ဆုံးအရာ ... သင်၌အကောင့်တစ်ခုရှိပါသလား Gravatar.com? ယခု set up တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသင်၏အများဆိုင်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပါ။ သင်၏လူမှုကွန်ယက်များ၊ ဖော်ပြချက်နှင့်ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်?
Gravatar's များသည်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ၊ မှတ်ချက်တစ်ခုနှင့်သင်၏အီးမေးလိပ်စာထားခဲ့သည့်နေရာတွင်သင်၏ဓာတ်ပုံကိုပြသရန်အသုံးပြုသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ - သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုခိုးတာ၊ မပြတာတွေ၊ hash key တစ်ခုဖန်တီးတာပါ။ ပြီးတော့အဲဒီ hash key ကသင့်ဓာတ်ပုံအတွက်ဖိုင်နာမည်ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံသောစနစ်ဖြစ်သည်။ Gravatars သည်အချိန်အတော်အတန်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်သင်သည် Gravatar.com တွင်လူမှုရေးပရိုဖိုင်းကိုအပြည့်အဝတည်ဆောက်နိုင်သည်။ နှင့် Gravatar အများပြည်သူ profile များကိုဖွင့်ကတည်းက, ချွန်ထက်ရှေးရှေး Automattic (WordPress ကိုဖန်တီးသူများ) သည်အလုပ်များနေကြသည်။
သင်၏ WordPress အုပ်ချုပ်ရေးနေရာမှသင်ယခုဖွင့်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည် Jetpack WordPress ၌တည်၏။ ၎င်းသည် WordPress အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော add-ons များအမြောက်အများဖြစ်ပြီးအသုံးပြုမှုမြင့်မားစေရန်နှင့် Cloud တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်သည် ဟော့ကတ်။ အကယ်၍ site တစ်ခုသည် Hovercards ကိုဖွင့်နိုင်လျှင် (သင်အမှန်တကယ်ပင် WordPress site တစ်ခုဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ)၊ မည်သည့် gravatar မဆိုသင် mouseover လုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ profile ကိုပြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူစိတ်ကူးအလုပ်လုပ်တက်အဆုံးသတ်:
Hovercards သည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းယခုတွင်လူကြိုက်များလာသည် Jetpack ကိုင်နေပါတယ် ပုံကိုမောက်စ်တင်ရုံဖြင့်သင်အသုံးပြုသူ၏ profile ကိုအလိုအလျောက်ရရှိလိမ့်မည်။ ချိုမြိန်! သင့်တွင် WordPress ဆိုဒ်မရှိပါက Gravatars (ရိုးရှင်းသော PHP လုပ်ဆောင်ချက်) နှင့် Hovercards (jQuery နှင့် Hovercard script) ကိုသုံးနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
TweetTwo: မှန်ကန်သောသတင်းစကား၊ အချိန်မှန်၊ နေရာအမှန်
သြဂုတ်လ 30 ရက် 2011 ခုနှစ် 6:39 နာရီ
သြဂုတ်လ 30 ရက် 2011 ခုနှစ် 6:40 နာရီ
ဟမ်၊ အံမခန်း၊ Doug၊ သင့်ပုံသည် ပေါ်လာတော့မည်ကဲ့သို့ နယ်နိမိတ်ကို ပြသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဘယ်တော့မှ မပြဘဲ ရစ်ပတ်စက်ကို ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပြပေးသည်။ အဲဒါကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Gravatar က အသုံးပြုသူကို ရှာမတွေ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သင့်ဆိုက်ရှိ အခြားဘလော့ဂါအချို့သည် အလုပ်ဖြစ်ပေသည်၊ ထို့ကြောင့် သင်၏ Gravatar တွင် တစ်ခုခုမှားနေပြီဟု ကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။
သြဂုတ် 31, 2011 မှာ 12: 56 AM
Tolga မင်းက ငါ့ကို ဘာလို့ဒီလိုခေါ်တာလဲ။ 😉 ငါသိတယ် – တခြားအက်ဒမင်တွေနဲ့ အတူတူပဲမို့လို့ အက်ဒမင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငါအဲဒါကိုအလုပ်လုပ်နေတယ် ... မင်းသတိမထားသင့်ဘူး!
စက်တင်ဘာ 1, 2011 မှာ 4: 44 AM
Tolga ပုံသေ။ Gravatar ပေါ်ရှိ Marketing Tech Blog အတွက် အသုံးပြုနေသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို မထည့်မိကြောင်း တွေးလိုက်မိသည်။ သည်းခံပါ